Toamasina – 1 may 2016 : Nomarihana tamin’ny fambolen-kazo – Midi Madagasikara
You Are Here: Home → Faits-Divers → 2016 → mai → 3 → Toamasina – 1 may 2016 : Nomarihana tamin’ny fambolen-kazo
Nofidian’ny prefen’i Toamasina, Atoa Benandrasana Cyrille, ny andron’ny 1 may ny alahady teo, niarahany namboly hazo “acacia” tamin’ireo tale provensialy sy tale rezionaly ao Toamasina, tao amin’ny fokontany Tandroantsiry kaominina Antetezambaro amin’ny lalam-pirenena faha-05.
Fampivondron-kery. “Aleo marihana amin’ny asa ho fiarovana ny tontolo iainana tahaka izao ny andro eran-tany ho an’ny asa izao, satria efa tena iainantsika ny fihovan’ny toetr’andro noho ny fahasimban’ny tontolo iainana. Nefa ho fampivondronan-kery eo amin’ny samy mpiasam-panjakana ihany koa no tanjona”, hoy Atoa Benandrasana Cyrille. Raha nomarihan’ny minisitry ny tontolo iainana, ny ranomasina, ny ekolojia, ary ny ala, Rtoa Ndahimananjara Johannita, tonga manokana tao Toamasina mihitsy tamin’izao hetsika izao, fa “adidin’ny Malagasy tsirairay ny fambolen-kazo tahaka izao, sy ny fiarovana ny harem-pirenena izay ataon’ny sasany gaboraraka sy simbainy”.
Skoto katolika. Isany nandray andraikitra feno tamin’ity fambolen-kazo ity ihany koa ireo skoto katolika tao Toamasina, izay tompon-kevitra tamin’izao fambolen-kazo izao. Ho azy ireo araka ny fanazavan’ny filohan’ny skoto zokiny katolika fa “adidy napetraky ny fiangonana amin’izy ireo ny ho tia sy hiaro ny zava-boarin’Andriamanitra, ka isany tafiditra amin’izany ny fambolen-kazo tahaka izao”. Nahatratra 1ha ny tany novelan-kazo tamin’ity hetsika ity, ary zana-kazo 1.500 no novolena tamin’izany. Fantatra ihany araka ny fanazavan’ny minisitra Ndahimananjara Johannita, fa efa nanao sonia ilay fehin-kevitry ny COP21 farany teo ny Malagasy, izay hiakatra parlemantera Malagasy tsy ho ela izany mba hivadika ho lalana azo hampiharina eto amintsika.
Santatra ihany ity natao ity satria araka ny politikam-panjakana eo anivon’ny minisiteran’ny tontolo iainana, dia tany 45.000ha isan-taona no tokony hambolen-kazo eto amintsika, ka isany mandray anjara amin’izany ny isam-paritra sy isaky ny provensy ary isaky ny kaominina. Afaka telo volana ihany koa dia hisy ny fijerena ny hazo novolena izao, ka hosoloina izay maty ho kajiana kosa izay velona.